Kulanka Golaha Shacabka oo laga cabsi qabo inuu hareeyo Buuq - Awdinle Online
Kulanka Golaha Shacabka oo laga cabsi qabo inuu hareeyo Buuq
Wararka laga helayo xarunta Villa Hargeysa ayaa sheegaya in aanu weli furmin Kulankii Golaha Shacabka, iyadoo ay socdaan kulamo gaar gaar ah oo Xildhibaannada iyo Guddoonka xafiisyada kala duwan ee xarunta ku leeyihiin.
Sida wararku sheegayaan kulanka maanta oo ah mid xasaasi ah ayaa si aad ah isha loogu hayaa, waxaana laga cabsi qabaa inuu buuq harreeyo.
Qaar ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka ayaa ku eedeeyay Guddoonka Golaha Shacabka inuu rabo inuu ajandaha ka saaro arrinta matalaada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare oo shalay Mooshin ay saxiixeen illaa 130 Xildhibaan lagu dalbaday inay noqoto 13 kursi.
Sidoo kale Xildhibaannada qaar ayaa dalbanaya in cod hal dheeri ah ay noqoto, isla markaana sidaas lagu soo afjaro marka codeynta dhamaato xeerka matalaada aqalka Sare ee Gobolka Banaadir.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Guddoomiye Mursal uu doonayo inuu arrintan guddi u saaro, si ay sharci gaar ah uga soo tala bixiyaan, balse Xildhibaannada mooshinka keenay ayaa aad uga biya diidan.
Cabsida ugu badan ee Guddoonka qabo ayaa ah in kulanka buuq iyo qalalaase inuu harreeyo, maadaama laga war helay qorshaha Guddoonka ku damacsan yahay in aanu dood iyo codba gelin arrinta Gobolka Banaadir ee matalaada Aqalka Sare.
Doodihii labadii maalmood ee Xildhibaannada Baarlamaanka ka lahaayeen arrinta matalaada Aqalka sare ee Gobolka Banaadir ayaa si aad ah loogu kala duwanaa, waxaana hadalada qaar ahaayeen kuwo xasaasi ah.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Shaaciyey Goobta kulanka Dowladda Federalka ah Dowlad-Gobaleedyadda
Next articleAwood ma u leeyahay Madaxweyne Farmaajo inuu Joojiyo howlaha Baarlamaanka?.